Ubufakazi bokuthi ama-website aseka abakwaGupta alawulwa eNdiya | isiZulu
#GuptaLeaks: 'AmaGupta' ahlela ukuthenga amaphephandaba amakhulu kuleli
#GuptaLeaks: Amadodana kaNdunankulu kuthiwa aphathwa ntofontofo ngamaGupta
Johannesburg – I-Eyewitness News isithole obunye ubufakazi bokuthi i-website esabalalisa izindaba ezeseka umndeni wakwaGupta, i-wmcleaks.com, ilawulwa eNdiya.
IScorpio isanda kudalula ukuthi umkhankaso we-wmcleaks uhlangene kanjani nalowo “owayengunjiniyela” enkampanini yabakwaGupta, iSahara Computers IT, uSaurabh Aggarwal.
U-Aggarwal wajoyina le nkampani yabakwaGupta ngo-2008, kanti ikheli lakhe kwangu-3 Saxonwold Drive, Saxonwold – nokuyindawo engumakhelwane nesithabathaba somuzi womndeni wakwaGupta.
I-website i-wmcleaks ibhaliswe yiPrivacyProtect.org, nokuyinkampani ebhalisa ama-website kubantu abasuke befuna ukungaveli ukuthi bangobani.
Kubikwa ukuthi umthombo we-EWN uthumele i-link yemininingwane yale website kulowo oyi-administrator wekhasi lakuFacebook le-wmcleaks, nelibe selivulwa umuntu okwazi ukufinyelela kuleli khasi.
Lokhu kube sekuxhuma i-IP address yale website, nokwabe sekutholakala umkhondo wayo ukuthi usenkampanini ehlinzeka ngezinsiza ze-internet ezinze kwelaseNdiya, eNew Delhi.
U-Aggarwal, nowayengumsebenzi we-ANN7, kubikwa ukuthi washiya ngonyaka ka-2015 wabe esejoyina inkampani yezobuchwepheshe nalapho kuyimanje ezinze khona, eNew Delhi, India
Ngomhlaka-19 kuJune 2017, le website ishicilele udaba ‘olumbula izinqe’ ngalowo owayenguMhleli weBusiness Day.
NgoLwesine ekuseni, iqeqebana labalandeli beBlack First Land First libhikishe ngaphandle komuzi kaBruce , eGoli. UBruce utshele iTimesLIVE ukuthi ubengekho lapho, kodwa ubesesiteshini samaphoyisa eParkview ukuzobika ngalolu daba.
Lokhu kuza ngemuva kokuthi iBlack First Land First ikhiphe isitatimende ngoLwesine igxeka “imithombo yabezindaba yabamhlophe” ngokuqhuba “umkhankaso omkhulu wokumelelana neqiniso”, yaphinde yanxusa ukuba kube nombhikisho ngaphandle kwekhaya likaBruce.
Emizuzwini eyi-2 edlule